Indlela yokwandisa ubuhlobo bakho noThixo ngamanyathelo ama-5
Ungabunyusa njani ubuhlobo bakho noThixo kumanyathelo ama-5. Umntu sisilwanyana ekuhlaleni. Kufuneka sinxibelelane ngendlela esondeleyo nabantu esibathandayoSifuna uthando kunye nothando lwabanye abantu ukwakha umhlaba wethu wangaphakathi.
Nangona kunjalo, ekuphela kwendlela yokwenza ukwakha ubumoya bethu ukuze ilizwe lethu langaphakathi ligcwaliswe ubudlelwane bethu noThixo. Ke ngoko, kubalulekile ukwandisa ubudlelwane bethu noBawo.
Ukusondelelana noThixo yinto eyenzelwe yona sonke kufuneka sizabalaze. Kufuneka sazi ukuba uThixo uthanda yonke into el mundo kwaye ufuna ubudlelwane obusondeleyo nathi sonke. Ngesi sizathu, sicinge ukuba kufanelekile ukwenza inqaku ukuze ufunde ukuba ungakwenza njani yandisa ukusondelelana kwakho naye.
Ukusuka fumanisa.online, siza kukunceda ufunde indlela yokwandisa ubudlelwane bakho noThixo kumanyathelo ama-5. Ngaba siza kuqala?
1 Ungabunyusa njani ubuhlobo bakho noThixo kumanyathelo ama-5
1.1 1. Mazi uThixo ngelizwi lakhe
1.2 2. Fumana ixesha lokuthandaza nokuzila ukutya
1.3 3. Thobela uThixo
1.4 4. Hlalani ekuhlaleni
1.5 5. Yiba nombulelo
1. Mazi uThixo ngelizwi lakhe
Mazi uThixo ngelizwi lakhe
Akukho mntu usondelelene nomntu angamaziyo, kwaye Ukufunda iBhayibhile yeyona ndlela yokumazi uThixo. Kufuneka senze oko sixelelwa ngumdumisi: "Ndiligcinile ilizwi lakho entliziyweni yam ukuze ndingoni kuwe" (INdumiso 119: 11).
Enye ye Ezona njongo ziphambili zeBhayibhile kukutshintsha ubomi bethu. Sibona kumaHebhere 4:12: “Ngokuba ilizwi likaThixo liphilile, lisebenza, libukhali ngaphezu kwamakrele onke antlangothi mbini; lingena kwinqanaba lokwahlula umphefumlo nomoya, amalunga nomongo, lize ligwebe iingcinga neenjongo zentliziyo ”.
Xa siyazi iBhayibhile, siye simazi uThixo, ukuthandana kuyenzeka, siyazithemba kwaye siyakwazi ukulinda uThixo, nokuba imeko azikho mhle. Ibhayibhile siyamazi ukuba ungubani uThixo.
2. Fumana ixesha lokuthandaza nokuzila ukutya
Fumana ixesha lokuthandaza nokuzila ukutya
Njengokuba ufuna ixesha lokuba ubone abazali bakho okanye abahlobo bakho, kufuneka njalo Fumana ixesha lokuthandaza nokuzila ukutya, kuba kuphela kwendlela yokunxibelelana noThixo.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuyazi indlela oza kuyiphendula ngayo iNkosi ngomthandazo. Kule nto kubalulekile ukuba uyazi ukuba uthini uYesu:
Naxa sukuba uthandaza, musa ukuba njengabahanahanisi; Bathanda ukuthandaza kwizindlu zesikhungu nakwiikona zezitalato ukuze babonwe ngabanye. Ndiyaniqinisekisa ukuba, sele bewufumene ngokupheleleyo umvuzo wabo. Ke wena, xa uthandazayo, ngena egumbini lakho, uvale ucango, uthandaze kuYihlo osemfihlekweni. Aze uYihlo obona emfihlekweni akubuyekeze.
UMateyu 6: 5-6
Ngokungafaniyo neenkokheli zenkolo zelo xesha, ezazithandazela ukubonwa ngabantu, UYesu wathandaza kuba wayebuxabisa ubuhlobo obusondeleyo noyise.
Kwelinye icala, i ngokukhawuleza nanjalo izisa ukusondela nokusondelelana noThixo, njengoko isinceda ukuba sihambe umgama okanye sithintela ukuthanda kwethu ukumamela ukuthanda kukaBawo.
Ngaphandle kokuya phambili, abantu abebenolwalamano kunye noThixo kwimbali basebenzise ukuzila ukutya. Oku kwamenza ukuva nokuqonda ukuthanda kukaThixo ngokucacileyo. Ngale ndlela baba nolwalamano olusondele ngakumbi naYe.
UMoses wazila ukutya iintsuku ezingama-40.
U-Ezra wazila ukutya iintsuku ezi-3.
UEliya wazila ukutya iintsuku ezingama-40.
UDaniel nabahlobo bakhe bazila ukutya iintsuku ezingama-21.
UYesu wazila ukutya iintsuku ezingama-40.
Ungabandisa njani ubuhlobo bakho noThixo kumanyathelo ama-5: Thobela
Ukuthobela uthixo yayihlala ibonakala ebomini bukaYesu: "UYesu wathi:" Okwam ukutya kukuba ndenze ukuthanda kondithumileyo nokuba ndiwugqibe umsebenzi wakhe " (UYohane 4:34).
Kwesinye isicatshulwa sebhayibhile, uYesu wathi: "Ngokuba ndihle emazulwini, ndingaze kwenza ukuthanda kwam; ndize kwenza ukuthanda kwalowo wandithumayo" (UYohane 6:38).
Ukuthobela kukuma, ukwenziwa ngoqeqesho kunye nokuzinikela. Singaqaphela xa uKumkani uSawule engazange amthobele uThixo kwaye wafumana isilumkiso (1 Samuweli 15:22). Siye saqonda ukuba ngenxa yokungathobeli kwakhe, uSawule wamkelwa njengenkosi yakwaSirayeli kwaye izinto zaqala ukumhambela kakubi. USawule uchithe ithuba lakhe lokuthobela, ukusikelelwa, nokusondelelana neNkosi.
Sinayo Kuninzi okunokuzuzwa ukuba siyayithobela iNkosi. UNyana ngokwakhe wayethobela de ukufa. Okukhona sithobela, kokukhona sisondela kuThixo, kokukhona sifuna ukwenza ukuthanda kwakhe.
4. Hlalani ekuhlaleni
Ungabandisa njani ubuhlobo bakho noThixo kumanyathelo ama-5: Hlala ekuhlaleni
Xa sinamava okusondelelana noThixo, sonwabile kangangokuba sifuna ukwabelana nabanye, kubandakanya nabazalwana elukholweni.
UYesu ungumhlobo. Ngesi sizathu, Okukhona sisondela kakhulu kuYe, kokukhona siya kusondela ebantwini sizimisele nangakumbi. Kukho ukubaluleka kokuhlala kunye, ekuhlaleni (1 Yohane 1: 7).
Omnye umzekelo weBhayibhile esinokuwuqonda uku-1 John 4: 20: "Ukuba umntu uthi:" Ndiyamthanda uThixo ", kodwa umthiyile umzalwana wakhe, ulixoki, kuba lowo ungamthandiyo umzalwana wakhe, ambonayo, akanako ukumthanda uThixo, angamboniyo.
Umpostile uPawulos uqhubeka nomnye umyalelo: "Ke ngoko, anisengabo abasemzini, kodwa ningabemi abangcwele kunye namalungu osapho lukaThixo" (Kwabase-Efese 2:19).
UYesu usinika esi sikhokelo sicacileyo sokuba Sonke sibanye enkosini. Ubunye obunye, ukuzibophelela okufanayo, ubomi obufanayo, ukusondelelana okufanayo, ubomi ekuhlaleni.
Ukuze bonke babe banye; Bawo, njengokuba wena ukum, nam ndikuwe. Ukuze nabo babekho kuthi, ukuze ihlabathi likholwe ukuba wena wandithuma. KuYohane 17:21.
5. Yiba nombulelo
Ungalwandisa njani ulwalamano lwakho noThixo kumanyathelo ama-5: Yiba nombulelo
Umbulelo awunjalo, okanye ubuncinci akufuneki ibe, into ekhethekileyo kumaxesha amnandi. Ayenzelwanga umsebenzi omtsha kuphela, indlu entsha, imoto entsha.
Siyabona ukuba uthini uPawulos ngemeko yomntu, ukusilela kwakhe ukuqonda uThixo, ukuba nombulelo:
"Abantu baya kuba ngabazithandayo, ababawayo, abakhukhumeleyo, abanekratshi, abanyelisi, abangathobeli bazali, abangenambulelo, abangenabuthixo."
2 Timoti 3: 2
Ngokokuba bathe, bemazi uThixo, abamzukisa ngokoThixo, ababulela kuye;
AmaRoma 1: 21
KwiNdumiso 95:10 sibona iintliziyo ezingenambulelo zabantu:
Kwaba yiminyaka emashumi mane ndinomsindo kweso sizukulwana, ndathi, Bangabantu abangenambulelo entliziyweni; Abaziqondanga iindlela zam.
I-Psalm 95: 10
Yiba Intliziyo enombulelo itshintsha yonke into ebomini bethu. Ukwazi indlela yokwazi ukuba uThixo usinike ithuba lokonwabela ubomi.
“Bulelani kuYehova ngokuba elungile; uthando lwakho luhlala ngonaphakade .
KwiNdumiso 107: 1
Yenzelwe oko umbulelo nendumiso zihamba kunyeKuba xa sidumisa iNkosi, sibonisa umbulelo wethu kwaye siyabuvuma ubuhle bakhe.
Masisoloko sinombulelo, nokuba zithini iimeko, kwaye sikhumbule ukuba uhlala esifunela okona kulungileyo. Ukuba nentliziyo enombulelo kudala ukusondelelana neNkosi.
"Kwaye siyazi ukuba zonke izinto zisebenzisana ngokulungileyo kwabo bathanda uThixo, oko kukuthi, abo babiziweyo ngokwenjongo yakhe."
"Ngokuba ndiyazazi iingcinga endinazo ngani, utsho uYehova, iingcinga zoxolo, ezingezizo ezobubi; ukuba ndikunike isiphelo osithembileyo."
Siyathemba ukuba eli nqaku liyakunceda uqonde indlela yokwandisa ubudlelwane bakho noThixo kumanyathelo ama-5. Ukuba ngoku ufuna ukufunda indlela yokuthandaza uhambe kakuhle ngokwebhayibhile, Sicebisa ukuba uqhubeke ukhangela fumanisa.online.